Lalatiana Ravololomanana : “Misora-tena ho mpanohitra ireo depiote 73” -
AccueilSongandinaLalatiana Ravololomanana : “Misora-tena ho mpanohitra ireo depiote 73”
Lalatiana Ravololomanana : “Misora-tena ho mpanohitra ireo depiote 73”
19/05/2018 admintriatra Songandina 0
Tsy am-pihambahambana no nanambaran-dramatoa Lalatiana Ravololomanana, filoha nasionalin’ny antoko Manda ho an’ny Firaisam-pirenena, omaly, fa misora-tena ho mpanohitra ireo depiote 73 milaza ho depioten’ny fanovàna ireo fa tsy mpanohitra izany akory. “Raha milaza azy ho mpanohitra ireo milaza fa depiote ho an’ny fanovàna ireo, maninona no tsy alain’izy ireo ny toeran’ny filoha lefitra fahafito eny amin’ny Antenimieram-pirenena. Hatramin’izao mantsy mbola banga io toerana natao ho an’ny mpanohitra eny amin’ny Antenimieram-pirenena io”, hoy i Lalatiana Ravololomanana.
Raha ny marina, tsy afaka milaza azy ho mpanohitra mihitsy ireo depiote avy amin’ny Mapar sy ny Tim mivondrona ao amin’ny depiote ho an’ny fanovana ireo raha toa ka tsy manana sy maka ilay anjara toeran’izy ireo eny amin’ny Antenimieram-pirenena.
Noho izany indrindra, raha ny voalaza hatrany, dia toe-javatra sadasada ary tsy misy mandeha amin’izay laoniny ny ataon’ireto solombavambahoaka etsy amin’ny 13 mai ireto. Tsy tolona intsony ho an’ny fanovana sy fanaovana tatitra, araka ny ilazan’izy ireo azy ny ataony nanomboka ny 21 avrily lasa teo fa tena fanakorontanana fiainam-pirenena sy fiainam-bahoaka tsotra izao.
Tsy vitan’izany fa mikasa ny hampikatso tanteraka ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka ary ny toekarem-pirenena ireto depiote mpanakorontana ireto.
Ankoatra izay, nanatanteraka fikaonan-doha ny teo anivon’ny antoko Manda ho an’ny Firaisam-pirenena nanomboka omaly hatramin’ny anio. Anisan’ny dinihina amin’izany ny fiainan’ny antoko, ny mahakasika ny fiainam-pirenena, sns.
TAFA-PIFIDIANANA : Kandidà Paul Rabary